Akụkọ Bible: Chineke Ahọrọ Devid - Ebe Ndịàmà Jehova Na-edebe Ihe n’Ịntanet
Ị̀ HỤRỤ ihe mere ebe a? Nwa okorobịa a napụtara nwa atụrụ a n’ọnụ anụ ọhịa bea. Anụ ọhịa bea nke a bịara buru nwa atụrụ ahụ, na-achọ iri ya. Ma nwa okorobịa a chụwara ya, dọpụtakwa nwa atụrụ ahụ n’ọnụ bea ahụ. Ma mgbe anụ ọhịa bea ahụ biliri, nwa okorobịa ahụ buuru ya tigbuo! N’oge ọzọ, ọ dọpụtara otu atụrụ n’ọnụ ọdụm. Obi kara nwa okorobịa a, ọ̀ bụ na i cheghị otú ahụ? Ị̀ ma onye ọ bụ?
Ọ bụ Devid. O bi n’obodo Betlehem. Nna nna ya bụ Obed, nwa Rut na Boaz. Ì chetara ha? Ma nna Devid bụ Jesi. Devid na-azụ atụrụ nna ya. A mụrụ Devid afọ iri mgbe Jehova họpụtasịrị Sọl ịbụ eze.
Oge ruru mgbe Jehova gwara Samuel, sị: ‘Were mmanụ pụrụ iche jee n’ụlọ Jesi onye bi na Betlehem. Ahọpụtawo m otu n’ime ụmụ ya ndị nwoke ịbụ eze.’ Mgbe Samuel hụrụ Elayab nwa Jesi nke kasị okenye, o kwuru n’obi ya, sị: ‘Onye a ga-abụrịrị onye nke Jehova họọrọ.’ Ma Jehova sịrị ya: ‘Elela ogologo na ịma mma ya anya. A họpụtaghị m ya ịbụ eze.’
Jesi wee kpọtara Samuel nwa ya bụ́ Abinadab. Samuel wee sị: ‘Jehova ahọrọghịkwa onye nke a.’ Jesi kpọtakwaara Samuel nwa ya bụ́ Shama. Samuel wee sị: ‘Ee e, Jehova ahọrọghịkwa ya.’ Jesi wee kpọpụtagidere ya ụmụ ya ndị ikom ruo na nke asaa, ma Jehova ahọrọghị nke ọ bụla n’ime ha. Samuel wee jụọ ya, sị: ‘Ụmụ nwoke gị niile hà agwụla?’
Jesi wee sị ya: ‘Ọ fọdụrụ nke kasị nta. Ma o jere n’ebe ọ na-azụ atụrụ.’ Mgbe a kpọtara Devid, Samuel hụrụ na ọ bụ nwa okorobịa mara mma. Jehova wee sị: ‘Ọ bụ onye nke a. Wụsa ya mmanụ n’isi.’ Otú ahụkwa ka Samuel mere. Oge ga-eru mgbe Devid ga-abụ eze Izrel.
Gịnị bụ aha nwa okorobịa nke nọ na foto a, oleekwa otú anyị si mara na o nwere obi ike?
Ebee ka Devid bi, gịnịkwa bụ aha nna ya na nna nna ya?
N’ihi gịnị ka Jehova ji gwa Samuel ka ọ gaa n’ụlọ Jesi na Betlehem?
Gịnị mere mgbe Jesi kpọpụtaara Samuel ụmụ ya asaa?
Mgbe a kpọpụtara Devid, gịnị ka Jehova gwara Samuel?
Gụọ 1 Samuel 17:34, 35.
Olee otú ihe a merenụ si gosi na Devid nwere obi ike nakwa na ọ tụkwasịrị Jehova obi? (1 Sam. 17:37)
Gụọ 1 Samuel 16:1-14.
Olee otú okwu Jehova nke dị na 1 Samuel 16:7 si enyere anyị aka ịghara ile mmadụ anya n’ihu na imeso mmadụ ihe na-adabere n’otú ọ dị n’elu ahụ́? (Ọrụ 10:34, 35; 1 Tim. 2:4)
Olee otú ihe atụ Sọl si egosi na mgbe Jehova napụrụ mmadụ mmụọ ya, mmụọ ọjọọ, ma ọ bụ ọchịchọ ime ihe ọjọọ, pụrụ ịnọchi ebe ahụ mmụọ Jehova si pụọ? (1 Sam. 16:14; Mat. 12:43-45; Gal. 5:16)